Good News: Khilaafkii masaajidka Towfiiq oo ugu danbeyn xal laga gaaray.c - NorSom News
Good News: Khilaafkii masaajidka Towfiiq oo ugu danbeyn xal laga gaaray.c
Sida ay NorSom News xaqiiqsatay, waxaa maalintii sabtida aheyd oo ku beegneyd sadexda bisha January ee sanadkan 2020 xal kama dambeys ah laga gaaray khilaafkii u dhaxeeyay labada kooxood ee soomaalida ah, kuna saabsanaa maamulka masaajidka Towfiiq ee magaalada Oslo.
Masaajidka Abu-bakar Al Sadiiq ee Drammen oo garwadeen ka ahaa wadahalada iyo ururka midowga masaajida ay soomaalidu maamusho ee Norway (Maraakiista), ayaa ugu danbeyn ku guuleystay inay isku soo dhaweeyaan, meelna isugu keenaan labada koox ee soomaalida ah ee isku heystay maamulka masaajidka.
Khilaafkan oo ahaa mid mudo soo jiitamayay ayaa sababay in bartamaha bishii na dhaaftay ee Desember uu maamulka xafiiska gobolka Oslo ku hajnabo inuu urur diimeed ahaan u tirtiri doono ururka masaajidka maamula ee TIS. Wuxuuna xafiiska gobolku soomaalida siiyay shan isbuuc oo ay khilaafkaas xal kaga gaaraan.
Waxaa dhiman arimo farsamo oo yar-yar:
Waxaa naloo xaqiijiyay in guud ahaan xal laga gaaray qodobadii la isku heystay, balse ay wali dhimanyihiin qaabkii farsamo ahaan iyo sharci ahaan la isku waafajin lahaa, sida dowlada loogu gudbiyo in khilaafkii xal laga gaaray, iyada oo lasii marayo qareemada ay labada kooxood kala wateen.
Maraakiista howshan gacanta ku heysay ayaa naloo sheegay inay dhawaan dhankooda soo saari doonaan bayaan(qoraal) ay ku cadeynayaan qodobada lagu heshiisay. Inkasta oo markii horeba aan si fiican bulshada looga dhaadhicin qodobada la isku heystay ee khilaafka gaarsiiyay heerka uu gaaray dhamaadka sanadkii tagay.
Previous articleSolberg: 674 qof ayaa sanadkii 2018 isku dilay Norway.
Next articlePer Sandberg: Waxaan hada kahor qiimeeyay inaan is dilo.
Dowlada oo soo jeedisay in lacagta ceyrta laga jaro ajaaniibta aan luuqada baran.
EU-da oo raba in la tirtiro xeerka faraha ee “dublin”.
Gobolka Oslo-Aftenposten: Kiiska Tawfiiq, waa mid kamid ah kiisaskii ugu adkaa ee abid nasoo mara.
Keydka NorSom Velg måned september 2020 (34) august 2020 (82) juli 2020 (54) juni 2020 (69) mai 2020 (83) april 2020 (68) mars 2020 (130) februar 2020 (69) januar 2020 (84) desember 2019 (22) november 2019 (71) oktober 2019 (54) september 2019 (50) august 2019 (96) juli 2019 (77) juni 2019 (78) mai 2019 (79) april 2019 (40) mars 2019 (64) februar 2019 (61) januar 2019 (40) desember 2018 (25) november 2018 (52) oktober 2018 (33) september 2018 (44) august 2018 (33) juli 2018 (28) juni 2018 (28) mai 2018 (39) april 2018 (41) mars 2018 (55) februar 2018 (36) januar 2018 (85) desember 2017 (83) november 2017 (105) oktober 2017 (119) september 2017 (112) august 2017 (110) juli 2017 (125) juni 2017 (115) mai 2017 (122) april 2017 (108) mars 2017 (137) februar 2017 (114) januar 2017 (106) desember 2016 (98) november 2016 (101) oktober 2016 (83) september 2016 (44) august 2016 (44) juli 2016 (28) juni 2016 (44) mai 2016 (24) april 2016 (25) mars 2016 (1)